トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira kuti kusarudza yakakwirira kukwanisa Utilisation nepachinko yokumusoro
Munhu wese ari, nezve kusarudza nepachinko zvitoro, mhepo uye basa payout uye zvitoro, nezvimwewo, ndinofunga kuti siyana ikoko, asi uchishandisa mamiriro kana uchida kubatsirwa nengaidzo achava pfungwa zvitoro makuru kusarudza.
kushanda chinzvimbo kwakafanana yakanaka nepachinko yokumusoro, kunewo noutano, ndizvo aibvumirwa kunzwa zvichida kunze. Kana mubvunzo kupi kuti waguma yatovapo, ndinofunga vanhu vakawanda aizopinda zvitoro zviri operative mamiriro akanaka. Kunyange kana kuonekwa nenzira dzakasiyana, asi ndinoreva kuti nepachinko yokumusoro kuti ingasvika chaizvo mabhizimisi kwave kuchibudirira, mu, uye wakanaka nepachinko yokumusoro shure kwezvinhu zvakanakira nekuipira pokuvhiyiwa, tichakurukura chii nguva yakadaro.
oparesheni ndechokuti zvakanaka, zvinodiwa ose mutengi, ndiko nepachinko yokumusoro kuti hwakazadzika. Mutsa uye mabasa chinhu, Chokwadi, chikamu payout Pakati pavo pachava guru pfungwa. Mukushanda akanaka nepachinko yokumusoro, ndiye anogona kusvika pamwero paavhareji, payout vanopa. Uyewo tiri zvakawanda zvine angakunda Sales, unogona kutarisira dzose ane payout.
Zvechokwadi, Will neapo uyewo pachena muunganidzwa musi ikoko, asi zuva nezuva Svinai womuenzaniso, nokuti ndiyo shanduro riri kunze munzira yacho, zvichienderana chinangwa, kuti zvichida kuhwina kunowedzera.
Mukuwedzera, akasiyana-siyana vatengi achauya kushanyira. Nekuti kunyange vaya vasingazivi nepachinko unouya zvikuru kuchitoro, pachikuva kufamba nechisimba, kana chinangwa kumira kuti pano mumwe nomumwe, pane anogona kazhinji kuva akasununguka tafura. Uye pamwero, saka kuti ini achitendeuka, mari yakawandisa diki uye unogona kutarisira kuti tiswedere nokurova. Vazhinji zvakanakira muchimhanya zvakanaka nepachinko chitoro, iwe ipapo.
Uyezve, sezvo siyana vanhu vanouya kushanyira, zvichida kuti mashoko muunganidzwa. zvitoro zvakanaka nokumhanya, saka vazhinji dzose vatengi, kana tinobudirira kutaura nevanhu vakadaro, akasiyana-siyana mashoko ose pamadiro vanofa chinhu kuuya nzeve.
Zvisinei, mune Ukuwo, pane chokwadi zvakare payakaipira.
稼 Chokwadi chokuti basa rakanaka, nechigadziko zvakanaka kuvhura nokukurumidza achabvisa akagara pasi. Nezvimwewo dzakakurumbira yokutevedzera ichangobva chemwenje, icho uchavigwa pakarepo vanoitisana. Mirai kukwikwidzirana vakasarudzwa inova kwazvo, inoti demerit oparesheni rakanaka nepachinko yokumusoro. Kuti ugare tafura nechinangwa, kubva rapfuura zuva, uye kuti chikuva ari rokutanga kuferefeta, iyo anokanda, unofanira kushanyira mangwanani mangwanani.
Mukuwedzera, ane imwe nguva closeout, kamwe iwe kusiya tafura, riri kuti kudzoka achava munhu agere kamwe, achava anenge zvisingabviri. Kana mari huwandu yakawedzera, apo iwe mapfumo, mumwe Kutsunga kana uchifamba pachikuva, ndinoti kuti rimwe demerit kuva kwakaoma.
kushanda chinzvimbo chiri kuzvitoro zvakanaka, hapana mubvunzo chinhu chakanaka chitoro. Rinoti muchitoro kuti anosanganisa noukomba akwezve vanhu, asi kuti vakadaro kuvamirira vo, ndinouya pachine uye kurwa hwakachinjawo vanhu kuyeuka.